Filazana · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Filazana · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Filazana tamin'ny Marsa, 2012
Mitady Tonian-dahatsoratra Lefitra ny Global Voices
Mediam-bahoaka 14 Marsa 2012
Mitady tonian-dahatsoratra lefitra ny Global Voices mba hanampy amin'ny fandaminana ireo lahatsoratra mivoaka isanandro amin'ny teny Anglisy. Ny Global Voices amin'ny teny Anglisy dia ivo iray ho an'ireo mpitoraka bilaogy mihoatra ny 400 sy mpandika lahatsoratra maneran-tany izay miara-miasa mba hitatitra anatina bilaogy sy ny mediam-bahoaka eny rehetra eny, amin'ny fanamafisana ireo feo tsy heno ao anatin'ny media iraisam-pirenena mahazatra.
Mitady Tonian-dahatsoratra Hitatitra Vaovao Avy Any Azia Afovoany
Azia Afovoany sy Kaokazy 09 Marsa 2012
Mitady tonian-dahatsoratra miasa tapak'andro ny Global Voices (GV) mba hanara-maso ny fandrakofana an-gazety ny vaovao mitranga avy any Azia afovoany
Azia Atsinanana 08 Marsa 2012
Mitady tonian-dahatsoratra miasa tapak'andro ny Global Voices (GV) mba hiantsoroka ny fanarahana ny lazain'olo-tsotra any amin'ny tambajotra teny-Sinoa. Ny Tonian-dahatsoratra no misahana ny fitateram-baovao amin'ny fiteny-Sinoa ka mitady sy mandrindra ny fandraisana anjaran'ny mpirotsaka an-tsitrapo. Izy ihany koa no mamokatra sy/na manitsy ny lahatsoratra lavalava maromaro isan-kerinandro sy ny lahatsoratra fohy miaty rohy mankany amina...